बाटोमा हिंडिरहेको बेला मोटरसाइकले ठ क्कर दिँदा प्रहरी इन्सपेक्टरको मृत्यु – Classic Khabar
August 10, 2021 181
मोटरसाइकलको ठ क्कर दिँ दा नवलपरासीमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) कपिल वाग्लेको मृत्यु भएको छ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका ४ घर भएका ४३ वर्षीय कपिल वाग्लेको गएराति रुपन्देहीको भैरहवामा उपचारको क्रममा मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नवलपरासीको बर्दघाटमा सोमबार बेलुकी मोटरसाइकलले ठ क्क र दि एपछि प्रहरी निरीक्षक कपिल वाग्ले गम्भीर घाइते भएका थिए। काठमाडौं बसुन्धाराका वाग्लेलाई हिडिरहेको अवस्थामा मोटरसाइकलले ठ क्क र दि एको थियो । उनी इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटमा कार्यरत थिए ।
वाग्लेलाई लु १४ प ८७५८ नम्बरको मोटरसाइकलले सोमबार बेलुकी ८ बजेतिर ठ क्क र दि एको नवलपरासी प्रहरीले जानकारी दिएको छ । वाग्लेको उपचारको क्रममा सोमबार राति ११ बजे भैरहवा मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकल चालक सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर १ का दीपेन्द्र पुन मगर पनि गम्भीर घाइते रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै उता दाङको ग्वार खोलाले ब’गाउँदा आज आमाछोराको मृत्यु भएको छ ।मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ सिम्लेनी निवासी ३५ वर्षीया अमृता घर्ती र उनका दुई वर्षीय छोरा रुद्र घर्तीे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । दिउँसो २ बजेतिर सिम्लेनीबाट पतेनी जाँदै गर्दा ग्वारखोलाको पतेनी घाट तर्ने क्रममा खोलाले ब’गाएर दुबै जनाको मृत्यु भएको हो । उनीहरुको शव दुई किलोमिटर तल भेटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले जानकारी दिए ।
Prevदार्चुलाका जयसिंह धामीको तुइन चुँडिएर महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? बोले सभामुख
Nextछोरीको काठमाडौं मृत्यु पछि, धादिङ्गमा बुवा आमाको पनि यस्तो दुखदायी मृत्यु
सलमानले चलाएको गाडीमा आखिर किन बस्न चाहान्निन उनकी आमा ? यस्तो छ कारण